Apple neAmazon vanopedzisa chibvumirano chakasarudzika pamabhuku ekuteerera | IPhone nhau
Makambani makuru anogona kukwikwidza mune mimwe minda, asi panguva imwechete vanogona zvakare kubatana pamwechete. Pakutanga takazviona ne Samsung, uyo anoita kunge ane ese mavhoti ekugara nekugadzirwa kweiyo itsva OLED skrini yeinotevera iPhone 8. Amazon, iyo hukama parizvino husiri kupfuura panguva yayo yakanaka, yakasaina kontrakiti Makore gumi apfuura chete neApple zvekuti mabhuku ekuteerera ekambani yayo Anonzwika, aingowanikwa chete kuburikidza neTunes, uye kuti iyi femu ndiyo yega yaigona kupa mhando yemabhuku aya muchitoro chebhuku reApple.
Chibvumirano ichi chakawana kuti nekufamba kwenguva makambani ese anga achingova nzira chete yekuwana mhando iyi yezvinyorwa, izvo kanopfuura kamwechete zvaive dambudziko pamberi pekomisheni yeEuropean, nekuda kwemitemo yeantitrust. Chikwata cheGerman chemakwikwi, chakasundirwa neGerman Publishers Association, pamwe neEuropean Commission, chakwanisa kusvika chibvumirano neApple neAmazon kupedza musangano uyu wanga uchikuvadza makambani echitatu. Mushure mekupedzwa kwechibvumirano ichi, mabhuku ekambani Inonzwika anogona kuwanikwa kuburikidza nemamwe mapuratifomu edhijitari.
Chibvumirano ichi pakati peApple neAmazon chakazopera muna Ndira 5, chibvumirano chakasainwa nguva pfupi yapfuura kuenzaniswa kweBhuku Rinonzwika neAmazon muna2008, mubatanidzwa uyo wakatoita kuti veGerman Publishers Association, vari ivo vakamanikidzwa kutengesa mabhuku avo pane imwe nzira. migero isina kutenderera kwakawanda sekugona iTunes. Parizvino 90% yemabhuku ekuteerera akatorwa muGerman akagadzirwa neAnonzwika uye anowanikwa kuburikidza neTunes, izvo zvinoratidza chikonzero chekunyunyuta kwevatsikisi veGerman.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple neAmazon vanopedza yakasarudzika chibvumirano pamabhuku eodhiyo
Chris Lattner pachake anotsanangura zvimwe zvikonzero zvekubva kwake kuApple